Router Default password: Tsvaga default username, password & login URL yechero Router - WebSetNet
Router Default password: Tsvaga default username, password & login URL yeipi Router
Kana iwe uchitenga mutsva, inofanirwa kumisikidzwa zvichienderana ne ISP yako sisitimu yema network kuitira kuti ugone kugovera yako yekubatana bhajidhi pane akawanda midhiya. Kunyangwe iye mugadziri achiisa ruzivo rwese rwakakosha pabhokisi re router, kana uchinge warikanda kure, unogona tsvaga zita rekusarudzika, password, uye login URL yeiyo chero router kushandisa Router Default password.
Iyo michina iri nyore. Router Default password haiongorore zvakadzama kumugadziri wako router. Pane kudaro, inouya nerondedzero yevagadziri vane ruzivo rwese rwunodiwa. Semuenzaniso, kana uine D-Link router, unogona kuenda kuD-Link menyu. Iwe waizoona mamwe ma router emhando uye yavo yemazita uye password.
Iyi URL yekunaya ndiyo iyo router control panel URL iyo yaunofanirwa kuvhura kuti uise iyo router kana kupinda ma IP kero iyo ISP yako yakagoverwa kwauri. Username ne password zvinofanirwa kupinda muiyo control panel.
Tsvaga default Router username & password
Izvi zviri nyore chaizvo uye kwete kutora nguva yakawanda zvakare. Sezvo ichi chiri chinhu chinotakurika app, haufanirwe kuchiisa pamushini wako. Ingo kurodha uye bvisa zviri mukati meZipi faira. Iwe uchawana a RouterDP.exe file. Dzvanya kaviri pairi kumhanyisa chishandiso.
Iwe unofanirwa kushandura rondedzero ye router nekudzvanya iyo RATIDZA ZVINHU ZVESE bhatani kuti uwane yako mutengesi we router yako uye iise yako zita rezita, password, uye login URL.
Kuti upinde mukati, iwe unofanirwa kudzvanya iyo link inoonekwa pasi Batanidza kuti uwane iyo Router / Modem interface chira. Wobva wadzvanya inoenderana neiyo router muapp, uye unotevedzera zita rekushandisa uye password.
Kana iwe uchida kuvhura iyo Network Connections hwindo zvakananga, unogona kudzvanya menyu bhatani uye sarudza Network Connections panzvimbo yekupinda ncpa.cpl mune Runomhanya.
Router Default Chirevo chemahara
Ndinovimba ichi chidiki diki chinogona kubatsira. Kana iwe uchida, iwe unogona kutora Router Default password kubva pano.
Dzorerazve Microsoft Account Password Kubva Windows 10 Login Screen
Categories Mapeji: rel Post navigation
Chinese Xi'an UniIC Semiconductors Inotanga Kutengesa DDR4 Chips neModules
Aquaris E4.5 Ubuntu Runhare - Iine Android